दु:खद यात्राको दस्तावेज - साहित्य - नेपाल
दु:खद यात्राको दस्तावेज
गैरकानुनी बाटोबाट अमेरिका जान खोज्ने हजारौँ युवकयुवतीको दु:खको दस्तावेज हो, तल्लो बाटो ।
- दीपेश नेपाल
दु:खकै कथा स्मरणीय हुन्छन् । कृष्ण धरावासीको उपन्यास तल्लो बाटो गैरकानुनी बाटोबाट अमेरिका जाने नेपाली युवाहरूको कथा हो । उपन्यासलाई कल्पनाले भरिपूर्ण भनेर तारिफ गर्नु त्यति अर्थ हुँदैन । कथामा देखिने कहालीलाग्दा घटनाको तस्बिर नै उपन्यासको सबल पक्ष हो । यथार्थ प्रस्तुतिका कारण उपन्यास सामान्य कृतिभन्दा माथि उक्लेको छ ।
आकाशलाई देशको राजनीतिक अस्थिरताले अमेरिका जाने सपनातिर डोर्‍याउँछ । नवविवाहिता श्रीमती र आमाबुबालाई छाडेर अमेरिका जाने यात्रा तय गर्छ । नेपालबाट दलाललाई मोटो रकम तिरी हिँडेकाहरू अमेरिका यात्रामा भेटिन्छन्, सौरभ, विक्रम, कमलेश, चन्द्रवीर र समीरजस्ता साथीहरू । उनीहरूमध्ये सौरभ, विक्रम र कमलेशका कथा नेपाली जनजीवन सुहाउँदो नै लाग्छन् । तर, माओवादी युद्धको सेरोफेरोका कथा, मधेस–पहाडको राजनीतिक विश्लेषण, लम्बेतान भूमिकाजस्ता संवाद उपन्यासको आधा भागसम्म पनि त्यति चाखलाग्दा छैनन् । न विशेष लाग्छन् । कुराहरू देखिनुमा भन्दा भनिनुमा जोड गरिएका छन् ।
उपन्यासमा दु:ख पाउने यात्रीहरूको कथा तब मात्रै सुरु हुन्छ, जब आकाश पक्राउ पर्छ । र, नेपाल फर्काइए पनि फेरि यात्रा जारी राख्छ । आकाशसँग भेटिन आउने पात्रहरूको माध्यमबाट लुकेर गरिने अमेरिका यात्राका दर्दनाक अवस्थासँग परिचित हुन्छन् । परदेशी भूमिमा दलालको त्रास, शोषण र पशुसरहको व्यवहार खेप्ने सेल्टरको हुलमा हरेकको बिजोग पढ्दा बल्ल उपन्यासको सान्दर्भिकता महसुस हुन्छ । मकरजस्ता दलाल पात्रहरू सजीव छन्, जो कुनै बेला आफैँ अमेरिका यात्रामा निस्किएका थिए र कालान्तरमा नेपालीहरूकै शोषणमा लिप्त भए । पाका लेखकका जीवनबोधी वाक्यहरू ठाउँठाउँमा छन् । त्यसबाट वर्णनको मर्म सहजै बोध हुन्छ । ‘ आज १४ वर्ष भयो, म नेपालबाट अमेरिका हिँडेको, अहिलेसम्म बाटैमा छु ।’ ‘ठगिनै हिँडेका यिनीहरूलाई नठगे कसलाई ठग्नू ?’ जस्ता संवादहरू घतलाग्दा छन् । प्रशस्त भेटिने यस्ता संवाद उपन्यासको प्राण हो ।
विदेशमा दलालले व्यवस्था गरेको सेल्टर, खुसी र पैसाको अभाव, अनिश्चय र प्रशस्त मानसिक पीडा, नेपालीहरूले भोग्नुपरेको दु:ख, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरूमा यताउता गरिरहनुपर्ने बाध्यता पढ्दा लाग्छ, आफैँलाई छटपटी हुने यस्तो यात्रा गर्न किन मान्छे तम्सिन्छन् ? के अमेरिका बस्न नपाए जिन्दगी नै बेकार हुन्छ र ? कहिले गाडीमा कोचिएका छन्, कहिले त्रासद गैरकानुनी समुद्री यात्रा गर्छन्, दलालहरूको आर्थिक र यौनशोषण बेहोर्छन् । कथा कहालीलाग्दो छ । हजारौँ डलर खर्च गरेर अमेरिका छिर्ने सपना बोकेका नेपालीको मात्र होइन, अन्य देशका नागरिकका कथा पनि पुस्तकमा समेटिएका छन् ।
अन्य पात्रहरूका लागि नायक, अभिभावक, सहयात्रीका रूपमा देखिएको छ, आकाश । उपन्यासको अन्तिममा उसले आफ्ना निम्ति मात्र सोच्न थाल्नुमा स्वार्थी मनसाय देखिँदैन ।
यात्रामा कहाँ कतिन्जेल बस्ने भर–ठेगान हुँदैन, पैसामाथि पैसा बर्साइरहनुपर्छ, जुन आमनेपालीका लागि दुरुह कुरा हो । उपन्यासमा यात्रीहरू थुप्रै छन् । कथाको सुरुआतमै आकाश अमेरिका पुग्छ भन्ने थाहा भएकाले उसका सहयात्रीहरूको नियतिबारे कौतूहल भइरहन्छ । घर–आफन्त सम्झिरहूँ जस्तो लाग्ने, बिर्सूंजस्तो पनि लाग्ने यात्राबाट थोरैले मात्र फर्कने चाहना राख्छन् । नेपालीहरू दास पनि भएका छन्, मरेका छन्, मारिएका छन्, जेलमा थुनिएका छन् । बिरानो ठाउँमा हराएका छन् ।
उपन्यासमा खट्केको कुरा हो, आकाशको अधिनायकत्व । मूल पात्र भए पनि हरेक स्थानमा जान्ने–बुझ्ने, चलाख देखिँदा उसका व्यक्तिगत भोगाइ चित्त बुझ्ने गरी महसुस गर्न पाउँदैनन् पाठकले । यात्रामै हराएका, मरेका, जेल परेका व्यक्तिहरूको कथा पनि लेखकले सुनाएको भए हुनेजस्तो लाग्छ । यस्ता कथाहरूले उपन्यासलाई अझ पूर्णता दिन्थ्यो कि !
यात्राको उद्देश्य नै हुन्छ, पूर्णता । त्यसैले युवाहरूलाई आफ्ना कष्टहरू पचाउँदै जाने बानी परेको छ । एकअर्कालाई कष्ट पर्दा सहयोग गर्न नसक्नु, दलालका गुण्डाहरूअगाडि लाचार भएर पसारिनु आफैँले जन्माएका परिणाम नै हुन् । उपन्यासमा भनिएझैँ बुद्धि र विवेक सबै बाटोमै छुट्छन् । र, खोक्रो शरीर मात्र पुग्छ अमेरिका । यसरी अमेरिका पुगेकाहरूमध्ये कति अहिले ग्रिनकार्ड होल्डर छन् तर तिनी विजयीका उदाहरण होइनन् । प्रत्येक नयाँ यात्रापछि लेखकले सामूहिकतामा हुर्किएको सुखद माहोलको अंश राखेकै छन् । तर, त्यसले यात्रीहरूको दयनीयताप्रति उत्साही बनाउँदैन ।
सेल्टर, जहाज, गाडीमा नेपालीबीच अन्य देशका नागरिकलाई पनि साथमा राखिएको दृश्यले मानव तस्करी ठूलो छ भन्ने मात्र बताउँदैन, अमेरिका जानैपर्छ भन्ने मोह कति ठूलो छ भन्ने पनि छर्लंग पार्छ । बलात्कृत भएकी रीता, जहाजका उकुसमुकुस दिनहरू र आकाशको अन्तिम जंगल यात्रा र दलालसँगको उसको वार्तालाप स्मरणीय छन् ।
तल्लो बाटो हराउने बाटो हो, छुट्टिने बाटो हो, अभर पार्ने अभूतपूर्व दु:खद बाटो हो । आफू र आफन्त पिर्ने यस्तो सपनाको बाटोमा कसैले पाइला अघि नसारोस् । गैरकानुनी बाटोबाट अमेरिका जान खोज्ने हजारौँ युवकयुवतीको दु:खको दस्तावेज हो, तल्लो बाटो ।